Fanotana fady sy fanimbazimbana: vaky ny fasana miisa 11 an’ny mpanjaka Mahafalin’i Linta | NewsMada
Tena efa tafahoatra sy tsy rariny. Miisa 11 ireo fasan’ny mpanjaka Mahafalin’i Linta, vaky hatramin’ny fiandohan’ny taona no ho mankaty. Tsy afaka ny hangina intsony ireo taranaka sy ny mpandala ny nentin-drazana.
Nambaran’ny mpitondra teny sady nahazo alalana amin’ny anaran’ny mpanjaka Efionjonana, ny Anakova Ramanantsoa Guy fa anisan’ny fananam-pirenena ireo fasana ireo. “Tsangambato hahatsiarovana ny tantaran’ny firenena malagasy izany. Noho izany, raisinay taranaky ny mpanjaka Mahafalin’i Linta ho adidy ny mampandre ny tompon’andraikitra ao amin’ny fitondrana sy ny vahoaka malagasy satria toy ny mpiandry omby volavita ihany izahay mikasika ireo fasana ireo: tsy tompony fa mpamerin-doha !”, hoy izy. Nanteriny fa anisan’ny tena masina ho azy ireo, araka ny lilin-drazana, ny momba ireo fasana ireo. Ala faly no misy azy ireo ka tsy azo kapaina. Tsy azo idirana na inona antony na inona antony raha tsy handevina, araka ny nambarany hatrany. Tsy mijanona eo ihany anefa izany. “Re fa voa tahaka izany koa ny fasan’ny mpanjaka Mahafaly any amin’ny toerana hafa hangalarana ny volafotsy fitondran’ny mpanjaka nivilasy”, hoy ihany izy.
Miandrandra fandraisana andraikitra
Manoloana izany, notsiahiviny fa manome lanja betsaka ny hanitra nentin-drazana mampiavaka ny Malagasy ny fitondrana, amin’izao fotoana izao. “Entinay am-panajana eo anatrehanareo tompon’andraikitra mahefa izao toe-javatra mamoafady izao. Ho sahin’ny mpangalatra taolam-paty halaina ny taolambalo raha izao no mitohy”, hoy ihany izy.
Andrasana izany ny mety fandraisana andraikitry ny fanjakana.